Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Fiji » Ndị njem nlegharị anya Fiji kwupụtara ọkwa ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Fiji • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Brent Hill na -eweta ahụmịhe afọ 16 na njem nlegharị anya na ịre ahịa dijitalụ, mgbasa ozi, akara, nkwukọrịta, mkpọsa, na atụmatụ onye isi na Fiji National Tourism Office.
Mgbe mgbochi ókèala dị mfe ma maliteghachi njem, Fiji ga -achọ mgbanwe na imepụta ihe n'ahịa n'onwe ya dị ka ebe na -adọrọ adọrọ, nke na -achọsi ike yana ebe nchekwa.
Iweghachi ọrụ ndị njem agaghị abụ naanị weghachi ọrụ maka ọtụtụ narị puku ndị Fiji, mana ọ ga -enyekwa aka nke ukwuu na mmaliteghachi akụ na ụba site na mmetụta nke ụlọ ọrụ.
Brent Hill nọchiri anya onye isi oche mbụ Matt Stoeckel, onye ọrụ ya kwụsịrị na Disemba 2020.
Njem nlegharị anya Fiji ekwuputala nhọpụta onye isi azụmaahịa njem nlegharị anya nwere ahụmahụ, Brent Hill dị ka onye isi ndị isi. Hill, onye kacha nso nso a bụ onye isi nchịkwa azụmaahịa maka South Australia Tourism Commission, na -eweta ahụmịhe afọ 16 na njem nlegharị anya na ịzụ ahịa dijitalụ, mgbasa ozi, akara, nkwukọrịta, mkpọsa na atụmatụ isi na Fiji's National Tourism Office. Ọ na -anọchi onye isi oche mbụ Matt Stoeckel, onye ọrụ ya kwụsịrị na Disemba 2020.
Na -ekwu maka nhọpụta Hill, Njem nleta Fiji Onye isi oche Maazị Andre Viljoen kwuru, sị: “Obi dị anyị ụtọ ịnabata onye nwere ụdị Brent n'ọrụ a dị oke mkpa ọ bụghị naanị maka njem nlegharị anya nke Fiji, kama maka akụ na ụba Fiji. Brent na -enwu n'ime usoro mwepụta siri ike - bọdụ bidoro ma duzie ya site na enyemaka PwC - maka onye isi ga -eduga njem nlegharị anya Fiji n'oge ndị a na -enwetụbeghị ụdị ya mgbe ọrụ nlegharị anya mba ụwa efu kemgbe ihe karịrị otu afọ ugbu a. Ọkachamara ya, ahụmịhe ya, na echiche ya maka mweghachi nke ụlọ ọrụ ahụ dabara nke ọma na Fiji chọrọ ugbu a. ”
Maazị Viljoen gbakwụnyere, sị: “Mgbe mgbochi ókèala dị mfe ma maliteghachi njem, Fiji ga -achọ mgbanwe na imepụta ihe n'ahịa n'onwe ya dị ka ebe mara mma, ebumnuche na nchekwa. Anyị nọ n'otu ọnọdụ ebe ndị njem nlegharị anya ọ bụla ọzọ n'ụwa. Anyị niile na -aga maka otu ahịa, nke dị obere ugbu a na ikike imefu ego dị ala. A na -akwanyere Brent ùgwù nke ukwuu na ụlọ ọrụ nyere ọtụtụ ihe ọ rụzuru, anyị ga -achọkwa ọtụtụ mmekọrịta ya na njikwa njikwa ya na ndị mmekọ azụmaahịa zuru ụwa ọnụ iji zụọ ahịa ebe anyị na -aga, yana ezigbo nkwukọrịta ya iji mee ka ụlọ ọrụ anyị na ndị na -ekerịta ya nwee otu ebumnuche. . Ihe ọ ga -elekwasị anya ugbu a bụ ka ya na ndị isi na ndị ọrụ ahụike Fiji tozuru oke rụkọọ ọrụ iji weghachi ọrụ ndị njem. ”
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya, onye nsọpụrụ Faiyaz Koya nabatara nhọpụta Brent Hill dị ka onye isi njem nlegharị anya Fiji, na -ekwu, sị: “Iweghachi ọrụ njem agaghị abụ naanị iweghachi ọrụ maka ọtụtụ narị puku ndị Fiji, mana ọ ga -enyekwa aka nke ukwuu na mmaliteghachi akụ na ụba. ụlọ ọrụ si multiplier mmetụta. Anyị na-atụgharị akụkụ ugbu a site na mwepụta nke usoro ịgba ọgwụ mgbochi mba anyị na-atụ anya ịmaliteghachi ahịa karịa ahịa ọdịnala anyị. Nke a na -edobe ọnọdụ maka Maazị Hill na Njem Nleta Fiji idobere Fiji dị ka ebe kacha mma maka ndị dị njikere ịga njem. Anyị ga-elekwa anya na ọ ga-ejikọ ụkpụrụ ama ama nke ụwa niile nke ezigbo ile ọbịa Fijian, omume enyi na ịbụ eziokwu na ihe onye njem nke oge a chọrọ na atụmanya ya. Ebe Maazi Hill nọ n'isi njem nlegharị anya Fiji, anyị bụ nzọ dị nso n'itinye Fiji n'ahịa n'ụzọ zuru oke n'ahịa ụwa. "